Boorsada Boorsada Kombuyuutarka, Boorsada qurxinta, Boorsada safarka - Sansan
U oggolow macaamiisha inay ku raaxaystaan ​​waxyaabaha ay isticmaalaan
si faahfaahsan u eeg xaqiijinta tayada
Yiyi Sansandeng Trading Co., Ltd. wuxuu ku yaal magaalada Yiwu, ee gobolka Zhejiang, Shiinaha. Waxaan nahay warshad + shirkad ganacsi. Waxaan ku raaxeysanahay shabakad gaadiid oo ku habboon. Dhamaan alaabadayada waxaa lagu soosaaray qalab horumarsan iyo nidaamyo QC adag oo lagu hubinayo tayo sare. Waxaan dammaanad ka qaadaynaa xasilloonida, bixinta waqtiga, tayada la isku halleyn karo iyo adeegga daacadda ah. Alaabada waxaa loo dhoofiyaa Yurub, America, Japan, South Korea, Aasiya Dhexe, Ruushka, Koonfur Bari Aasiya iyo dalal kale iyo gobollada. Si fiican ayey u soo dhoweeyaan macaamiisha. , Ama jeclaan lahayd inaad dalbatid alaabada loo diyaariyey, ama OEM, fadlan nala soo xiriir. Aad ayaad u mahadsantahay!
si faahfaahsan u eeg